Akwụkwọ Nsọ nke a na-egere egere
Ịhe mmémmé nke na-ádị́ kwa mgbe kwa mgbe
Ụ̀kpụ̀rụ̀ ndị Mbụ nke Ọ̀mụ̀mụ̀ Baịbụl
Ọmụmụ Baịbụl nke ntọala
Okwu Agbamume ndị sitere na Baịbụl
Ozi gbasara anyị
Olee ndị bụ Family Radio?
Gee ntị na Family Radio
na smat foonu gị ma ọ bụ tabletị
app ya n’efu taa
Na-ekwusa Okwu nke Chineke nye ụwa ma na-akasi ndi nke Chineke obi
Ọgụgụ Baịbụl Chọta eziokwu
Ịhe ndị mmemme Gịnị dị ugbu a?
Ozi gbasara anyị Olee ndị bụ Family Radio?
Nnọọ na Family Radio!
Obi dị anyị ụtọ nke ukwu na ị bịaruola na Family Radio! Ịhe nile ị na-ahụ, na-agụ ma ọ bụ na-anụ na websaịtị nke a bụ nke e mebere iji kuziere gị ịhe ma kasikwa gị obi. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị ịgụ ịhe ederede nile anyị ma ọ bụ gee ntị n’ozi ndị anyị tinyere n’ígwè okwu, ịhe nile nke anyị wepụtara na websaịtị nke a bụ nke a na-enye n’efù na-anaghị ego.
Anyị na-añụrị ọñụ n’onyinye nke nzọpụta nke Chineke, nke Ọ na-enye ndị nke Ya n’efu. Na Family Radio anyị bu ụkpụrụ nke a n’obi we na-ewepụta ịhe nile nke anyị na-enye:…n’efù ka unu natara, nyenụ n’efù. Matiu 10:8. Ya bụ, nnọọ. Ezigbo òhèrè dịrị gị ịwere ịhe nkuzi nile a mụta ịhe, ma ka Chineke gọzikwa gị dịka ị na-agụ ma ọ bụ na-anụ Okwu Ya.
Anyị na-ekpe ekpere ka Chineke jiri Okwu Ya meghe anya gị ịhụ Eziokwu. Ka Family Radio bụrụkwa ịhe nkasi obi nakwa agbamume nyere gị dịka ị na-aga ije ma na-ejere Chineke ozi n’ime ụwa a. Ekele dịrị gị!
Family Stations, Inc – ụlọ ọrụ nke na-adịghị akpa úrù ego 501(c)3 maka ịje ozi – © 2014 Ikike mbipụtagharị nile dịrị anyị